Waxqabadka iyo Xakamaynta Fudud ee Deegaanka Ryokai LED
Nooca Badeecada: Hordhaca hawsha iyo habka wax soo saarka ee nalalka deegaanka Led light water light Farsamada: Nooca laydhka hoostiisa mara LED, wuxuu taageeraa heerka USITT DMX512 / 1990, 16-bit miisaanka cawlan, heerka cawl ilaa 65536, samaynta midabka iftiinka jilicsan oo jilicsan B ...
Laydhka dhulka ee loo yaqaan 'LED lamp' Xulashada wax soo saarka ee laambadaha
Laydhka dhulka hoostiisa / laydhka cagaaran ayaa hadda si weyn loogu isticmaalaa qurxinta jardiinooyinka, cawska, laba jibbaaran, barxadaha, sariiraha ubaxyada, iyo waddooyinka dadka lugaynaya. Si kastaba ha noqotee, codsiyada hore ee wax ku oolka ah, dhibaatooyin kala duwan ayaa ka dhacay nalalka lagu aasay LED. Dhibaatada ugu weyni waa dhibaatada biyaha. LED ee grou ...
Sida loo doorto isha iftiinka LED-ka saxda ah
Sidee loo doortaa isha saxda ah ee iftiinka iftiinka iftiinka dhulka? Iyada oo baahida sii kordheysa ee keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, waxaan si sii kordheysa u isticmaaleynaa nalalka LED-ka ee nalka dhulka. Suuqa LED-ka hadda waa isku jir kalluunka iyo masduulaaga, wanaagsan iyo ba ...
Iyada oo qayb muhiim ah ka ah muuqaalka
Maaddaama ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah muuqaalka, iftiinka muuqaalka bannaanka ma aha oo kaliya inuu muujinayo fikradda muuqaalka Habka sidoo kale waa qeybta ugu muhiimsan ee qaab dhismeedka bannaan ee howlaha banaanka ee dadka habeenkii. Saynis, jaango'an, iyo isticmaale-saaxiibtinimo muuqaal dibedda ah lighti ...